Kuma Ayaa Saxeex ku leh Markabka Hurdada ee Marmaray? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulYaa Saxeexa Under Wagons Sleeping Waddooyinka Marmaray?
10 / 06 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
kuwaas oo saxiixa hoos yimaada gaadhiga wata ee marmara
Yaa Saxeexa Under Wagons Sleeping Waddooyinka Marmaray? : Waa isku mid noqotey warshadeena woqooyiga ah ee loo soo gaabiyo booska hawlgabka, iyada oo shirkad South Korea iyo qandaraaslayda AKP ay ku degaan suuqa xawaaraha, waxayna u wareejiyeen wax soo saarka gudaha gudaha jeebkooda. Qofkii siiyey dhulkii ugu xiisaha badnaa TÜVASAŞ, wuxuu aasaasay warshadda Hyundai Eurotem, wuxuu saxiixay hindise Marmaray wuxuuna saxiixay heshiiska iibsashada baabuurta.
Gazeteduv waaÖnder Algedik'in Sida laga soo xigtay warka; X Wararka wargeyska XMUMX million-euro fiasco ayaa ku dhacay saxaafada Marmaray Khamiistii hore. Wasiir kuxigeenka Xisbiga Good Lütfü Turkkan ayaa ka jawaabay mooshinka Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, iyo wiyisha Marmaray oo sugayay bakhaarada agaasinka. Sida wararku sheegayaan, 478 oo ka mid ah 478 oo ka mid ah 10 xayndaab ah 34 wagons iyo xNUMX oo ka kooban xajmooyin 5 iyo wiyisha 20 ayaa lagu burburiyey bakhaarada.
Maaddaama arinta laga dooday, wasiirka ayaa ka jawaabay mooshinka waxaana uu beeniyay warka ku saabsan dareenka. 20 ayaa lagu furay Oktoobar 2013 markii la furay khariidadda Kazlyçeşme-Ayrılık Fountain.Halkalı 43 ayaa ku dhawaaqday bilowga qorshaha.
Maalin maalmaha ka dambaysa warka, wasiirka ayaa ka jawaabay mooshinka wuxuuna u diray war-saxaafadeed, waxaana uu beeniyay eedeymaha ah in tareenada la qalo. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in 20 wiqiyadaha baabuurta la furay bishii Oktoobar 2013 markii la furay xarigga "Kazlıçeşme-Ayrılık Fountain".Halkalı line, 2019 oo la dhigay bishii Maarso 43, ayaa labadoodu wali ku jiraa tareemada, sagaalka kale ee soo haray ayaa sugaya amar, ayuu yidhi.
Sidaa oo kale, waxa ay soo baxday in 53-da ay sii socotey tan iyo markii 20, 2013, oo loo isticmaalay sanadka oo dhan, hadda waa la isticmaalayaa, oo aan 6 marnaba loo isticmaalin, sidaa darteed 23 million euro, laakiin ma aha 11 million-euro wagons, sugayaan.
Waxay u muuqataa sida sawirka xun yahay laakiin aan aad u xunahay. Laakiin xaqiiqda, haddii aad eegto siyaasadda, waxaad arki kartaa 478 Milyan euro, maaha 113 million euro, ma ahan 2 million euro.
QIIMEYNTA DHALINYARADA, MAXAA ADEEGSO?
Turkey baabuur Industry Co. TÜVASAŞ waxaa lagu aasaasay 1951, wuxuu soo waday duubo ilaa tan 1964, wax soo saar, dib u cusbooneysiin iyo dayac-tirin 2 kun gaadiidka rakaabka 258 tan iyo markii la aasaasay. Warshadiisu waxay ku dhaawacmeen dhulgariir 38, waxaana lagu dhaawacay habab gaar ah sanado badan. Intii aad la macaamilaysay nabraheeda, gobolka ayaa isku dayay inuu dhammeeyo.
Ujeedada awoodda ayaa ah in la hubiyo in qeyb ka mid ah wax soo saarka wax-qabadka loo gudbiyo gacmaha. Awood ma taabto TÜVASAŞ. Wuxuu ogyahay in maalgashiga gaadiidka dadwaynaha la sameyn doono iyo in macaamilada raasumaalka laga saaro suuqa. Beerta TÜVASAŞ ee shirkadda Kuuriya si ay u dhisto xarun bandhig. Magaciisu waa Hyundai Eurotem A.Ş. Boqolkiiba shirkadan cusub waa shirkadda 50,5 Hyundai Rothem. Saamaynta 15 waxaa la siiyaa wershada wagon weyn sababtoo ah waxay leedahay dhulku. Boqolkiiba haray 35 waa Asaş Otomotiv, boqolkiiba 15 waa TCDD iyo qiyaasta 1 boqolkiiba waa Haco Group. Sidaa daraadeed, soo-saaraha woqooyiga ee soo-saarka ah ayaa si toos ah u gudbiya wadamada Korea-AKP.
Lammaanaha ugu yar waa ka badan shirkad yar oo la-talin ah. Boqolkiiba halaadku waa sida cusbada maraq. Maraq kastaa wuxuu leeyahay. Shirkadda la-talinta labadaba 3. Waxa uu la taliyaha ka yahay Eurasia Tunnel ee Bridge iyo YEKA qorraxda qoraxda ee 1000 MW. Mashaariicdaas oo dhan waxay wadaagaan waa in ay isku daraan caasimada Koonfurta Kuuriya iyo shirkadaha laga yaabo in ay u dhowdahay dawladda. Si kale haddii loo dhigo, soo-saarka dalka waxaa hadda loo wareejinayaa jeebka koox ka mid ah caasimadda gudaha iyo dibaddaba.
KA HORREEYAAD WAGON QAABKA!
Shaqada dhabta ah waxay bilaabataa ka dib. Marka saldhigga la dhigo 2006, Maareeyaha Guud ee TCDD ayaa sheegay in maalgalintani ay horseedi doonto is-dhaafsiga tiknoolajiyada iyo saamiga waxsoosaarka gudaha uu kordhin doono. Hyundai Eurotem ma soo saari doonto baabuurta, mana soo saarin warshadaha woqooyiga. Waxay u baahan tahay oo kaliya hawlo yar yar iyo dayactir. Waxa uu qaadaa amarro badan oo ah in uusan wax soo saarin inkastoo ay tahay.
MARMARAY WANAAGSAN AMA ADEEG!
Waa maxay maalgashiga wanaagsani waa in dhirta, oo lagu dhejiyo garabka warshadeynta xannaanadda ee 2006, ka qaybqaato hindisada Marmaray ee 2007. 10 November waxay ku guulaysataa gawaarida baabuurta ee 2008. 478 kuma koobna ganacsiga malaayiin euro. Tababarkan hooseeya wuxuu ka shaqeeyaa 80 shaqooyin bilaash ah ilaa 2014, oo ay ku jiraan shaqada 1,5 ee shaqada, Isboortiga IZBAN, IETT ee Topkapı-Habipler line, Yenikapı-Hacıosman, TCDD wagons, iyo xitaa taraamada Adana. 6 ma aha hawl fudud oo lagu soo saari karo ku dhawaad ​​hal kun oo gawaarida sanadkiiba. Waxaan u baahanahay warshad oo dhan si ay u soo saarto wax badan, laga yaabee 1000, laga yaabee 1500 waa shaqaale. Laakiin waxaad u maleyneysaa sidaas, waad khaldantahay. Ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan bogga internetka, oo waxaad arki doontaa qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan qofka 150 ee ka shaqeeya hareeraha.
LAND FROM WAGON FACTORY, MALASHA YURUB YURUB
Lütfü Turkkan, oo ah xisbiga GOOD, dhab ahaantii dib loo soo celiyay wax tan loo yaqaan tan 2014. Xitaa markaa, Ururka Gaadiidka Midawga Yurub wuxuu ku qeyliyay in aysan jirin mashruuc ku habboon dib u soo noqoshada toban xargo, qaybo ayaa la sameeyey iyo baabuurta wadiiqey ayaa looga tagay. Sidaas darteed, maanta, wararka qaar ka mid ah 478 million wagons been waxaa dhab ahaantii wajiga jilbaha. Xaqiiqdii, gudbin bilyan oo dollar ah waa barnaamij murugo leh. Waa barnaamij aad u liidata oo ah lacagta Yurub ee loo isticmaalay hirgelinta gawaarida marmaray, sida dhulalka wagon ee loo isticmaalay warshadda. Hindisahan waxaa lagu sameeyey maalgelinta ay bixiso Baanka Maalgashiga Yurub. Waxaa laga yaabaa in deyntaasi ay tahay mid xiiso leh oo ay na siiyeen dulsaar iyagoo dib u dhigtay Marmaray oo aan wacyigalin gaadhsiin sanado badan.
Waa isku mid noqotey warshadeena wagon-ga ah ee loo soo gaabiyo booska hawlgabka, waxay u oggolaatay shirkadda South Korea iyo qandaraaslayda AKP in ay degaan suuqa xawaaraha, waxayna u wareejiyeen wax soo saarka gudaha gudaha jeebkooda. Qofkii siiyey dhulkii ugu xiisaha badnaa TÜVASAŞ, wuxuu aasaasay warshadda Hyundai Eurotem, wuxuu saxiixay hindise Marmaray wuxuuna saxiixay heshiiska iibsashada baabuurta. Hadda wuxuu u tartamayaa duqa magaalada Magaalada caasimadda.
Qofka kale ee saxiixay qandaraaskii xayiraadda Marmaray waa maamulaha guud ee DLH muddadaas, wasiirka maanta oo jawaabay su'aashan!
Marmaray, oo leh awood u leh inuu raaco rakaabka kunka 150 laba jumlad saacaddiiba, waa 190 oo keliya oo ah kunka kun ee rakaab maalin kasta. Waan ogeyn inay noo tahay inaanu isticmaalno Bridge. Hadda waxaan kufaraxsanahay sababta keentay warshadda noocan ah ee la dilay oo u wareejiyay lacagta South Korea.
Kantaroolkoodu waa nadiif; Magaalada New York ee Istanbul
Qofna ma yaqaan Malatya Marmaris
Khatartu waa Marmaray
Gaadhihii ugu horreeyay ee Marmaray ayaa yimid Istanbul
Altepe, Waxaannu Leenahay 300 Trillion Walaacan leh Wagons Wax Soosaarka Qoysaska
Warshad Hyundai Eurotem
Yaa Saxeexa Under Wagons Sleeping Waddooyinka Marmaray? - Nidaamka Tareenka